Pregnancy and Pain relief during labor ကလေးမွေးရင် မနာချင် - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကလေးမီးဖွးတဲ့အခါ တကယ်နာပါတယ်။ ဘယ်ကနာနာ နာတာကို ခံနိုင်ရည်က ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် တယောက်နဲ့ တယောက် မတူကြပါ။ သားဖွါးခန်းမှာ အံကျိတ်မွေးသွားတဲ့သူတွေ ရှိသလို လုံအောင် ပိတ်ထားတဲ့ အခန်းကကျော်အောင် အော်ရသူတွေလဲ မနည်းပါ။ သူများနာနေတာကို ကြည့်ရက်သူ မရှိသင့်ပါ။ နာတာ သက်သာစေအောင် ပါရာစီတမောဘယ်နှစ်လုံးပေးပေး ကလေးမွေးချင်လို့ သားအိမ်ညှစ်တာကို သက်သာဘို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ တချို့ဆေးရုံတွေကတော့ ဒီဆေးပေးပါတယ်။ နဲနဲသက်သာသက်သာ အနည်းဆုံး စိတ်သက်သာရင်လဲ အကျိုးရှိတာဘဲ မဟုတ်လား။ ထိရောက်တဲ့ အနာသက်သာနည်းတွေ ရှိပါတယ်။ ပြည့်စုံမှု နည်းတဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ဒီနည်းတွေကို မလုပ်နိုင်ကြပါ။
1. Epidural အက်ပီဂျူရယ် ခါးထုံဆေးသွင်းနည်း
Epidural ဆိုတာ Anaesthetic မေ့ဆေး ထုံဆေးနဲ့ Pain-killing drugs မနာစေတဲ့ဆေး ၂ မျိုး ရောထားတာဖြစ်တယ်။ ခါးရိုးမကြီးထဲကို ထိုးပေးနေရတဲ့ ဆေးသွင်းနည်းဖြစ်တယ်။ Dura ခေါ်တဲ့ ခါးရိုးမကြီးထဲက အာရုံကြောမကြီးကို ဖုံးနေတဲ့ အလွှာတခုရဲ့ အပြင်မှာ ဆေးထိုးရတယ်။ Dura က အတော်အတန် ခိုင်တဲ့အိတ် ဖြစ်တယ်။ ဆေးထိုးလိုက်တာနဲ့ ဗိုက်အောက်ပိုင်းတခုလုံး ဘာမှန်းမှ မသိအောင် ထုံသွားတော့မယ်။
• မေ့ဆေးဆရာဝန်ကနေ လုပ်ပေးရတယ်။ ဆေးသွင်းမဲ့နေရာကို ရွေးပြီး ထုံဆေး အရင်ထိုးရသေးတယ်။ ဆေးထိုးအပ်ကို နေရာမှန်မှာထိုး၊ ပိုက်ကလေးတခု သွင်းပေးပြီး အပ်ကို ဖြုတ်ရတယ်။ ပြီးတော့ ထုံဆေးကို ပိုက်ကလေးကနေ သွင်းပေးနေတယ်။ ၉ဝ% ထိရောက်တယ်။
- မွေးရတဲ့အချိန် နဲနဲပိုကြာနိုင်တယ်။ ဆရာဝန်-ဆရာမကနေ ညှစ်ပါပြောတာနဲ့ ကိုယ့်ဖါသာသိတာနဲ့ မတူလို့ ဖြစ်တယ်။ Synotocinon (Pitocin) drip ဆေးသွင်းတာလဲ သူများတွေထက် လိုနိုင်တယ်။
အက်ပီဂျူရယ်ခါးထုံဆေးသွင်းနည်းလို လုံးဝ ထုံမနေလို့ အတော်အသင့် လှုတ်ရှားနိုင်တယ်။
4. Pethidine and Diamorphine ပက်သဒင်း နဲ့ ဒိုင်မော်ဖင်း
5. Meptazinol မက်ပတာဇင်နော
Painless childbirth ဗိုက်မနာဘဲ ကလေးမွေးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/painless-childbirth.html